INgoma yazo iiNgoma 8 | IBhayibhile Kwi-Intanethi | INguqulelo Yehlabathi Elitsha
INgoma yazo iiNgoma 8:1-14
8 “Owu akwaba ubunjengomtakwethu,+ obesanya amabele kamama!+ Ukuba bendikufumene phandle, bendiya kukwanga.+ Abantu bebengayi kundidelela. 2 Bendiya kukukhokela, ndikuse endlwini kamama,+ owandifundisayo. Bendiya kukunika ukuba usele iwayini eqholiweyo,+ incindi entsha yeerharnati. 3 Isandla sakhe sasekhohlo besiya kuba phantsi kwentloko yam; ingalo yakhe yasekunene—ibiya kundiwola.+ 4 “Ndiyanifungisa, zintombi zaseYerusalem, ukuba ningazami ukuluvusa okanye niluvuluselele uthando lwam lude luzivukele ngokwalo.”+ 5 “Ngubani na eli bhinqa+ linyuka livela entlango,+ lisayama kwisithandwa salo?”+ “Ngaphantsi kom-apile ndakuvuselela. Apho waba nenimba ngawe unyoko. Apho waba nenimba owakuzalayo.+ 6 “Ndibeke njengetywina entliziyweni yakho,+ njengetywina engalweni yakho; ngenxa yokuba uthando lunamandla njengokufa,+ ukuzingisa ekufuneni uzinikelo olupheleleyo+ akuyekeleli njengeShiyol. Amalangatye alo ngamalangatye omlilo, idangatye likaYa.+ 7 Amanzi amaninzi akanako ukulucima uthando,+ nemilambo ayinakulukhukulisa.+ Ukuba umntu ebeya kunikela ngezinto zakhe zonke ezixabisekileyo ngenxa yothando, abantu bebeya kumdelela.” 8 “Sinodade wethu omncinane+ akanamabele. Siya kumenzela ntoni na udade wethu mhla kuya kuthethwa ngaye?” 9 “Ukuba uya kuba ludonga,+ siya kwakhela phezu kwakhe uqoqo lwesilivere; kodwa ukuba uya kuba lucango,+ siya kumthintela ngeplanga lomsedare.” 10 “Ndiludonga mna, namabele am anjengeenqaba.+ Emehlweni akhe ndibe njengalowo ufumene uxolo. 11 “USolomon wayenesidiliya+ eBhahali-hamon. Isidiliya wasinika abagcini.+ Ngamnye ebeye azise iwaka lesilivere ngesiqhamo saso. 12 “Isidiliya sam, sesam, siselungelweni lam. Iwaka elo lelakho, Solomon, yaye amakhulu amabini ngawabo bagcina isiqhamo saso.” 13 “Owu wena uhlala emiyezweni,+ amaqabane anikela ingqalelo kwilizwi lakho. Mandilive.”+ 14 “Baleka umke, sithandwa sam, uze uxelise ibhadi okanye amankonyana amaxhama ezintabeni zeziqholo.”+
INgoma yazo iiNgoma 8